Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको राजीनामा माग – Emountain TV
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको राजीनामा माग
काठमाडौं, २६ भदौ । नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले डेंगु संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गौतमले डेंगुले देशै आक्रान्त बनिसक्दा मन्त्रालय विषयवस्तुको गाम्भिर्यतामा संवेदनशील नबनेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको राजिनामा माग गर्नुभएको हो ।
डेंगुबारे यथार्थ जानकारी गराउन सभामुखले सरकारलाई रुलिङ्ग गरेपछि आफ्नो धारणा राखेका सांसद गौतमले रुलिङ्ग गरेर मात्रै नहुने भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर बसेका मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ ? चुप लागेर बसेर रुलिङ्ग गरेर । टेबुल ठोकेर र सत्ता पक्ष कै सांसदले विरोध जनाएर मात्रै पुग्दैन । दुई तिहाईको एब्सुल्युट गर्भरमेण्ट हो यो । यतिबेला तपाईहरुले दिन नसकेको सुशासन कस्ले दिन सक्छ ? यतिबेला यो रुलिङ्ग गर्दिएको भरमा मात्रै यो झारा टार्ने काम । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेर मात्रै पुग्दैन । म जोडदार रुपले स्वास्थ्यमन्त्रीको राजिनामा माग्छु । र सरकार यसरी मुक दर्शक बनेर बस्न हुँदैन सभामुख महोदय । तत्काल संकटकालको घोषणा गर्नुपर्छ । देश आक्रान्त छ । तर सरकार मौन छ । म यसमा घोर आपत्ती जनाउँदै तत्काल राजिनामाको माग गर्छु ।”
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, मुलुकभर ५ हजार जना डेंगुबाट संक्रमित भएका छन् भने ६ जनाको मृत्यु भईसकेको छ ।